यी मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com यी मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री - खबर प्रवाह
यी मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको समाचारले बजारमा निकै ठूलो हल्लिखल्ली मच्चाए पनि बालुवाटारभित्र खासै बतास लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री अझै हप्ता–दश दिन केही गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्दैछ । पार्टी नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मको दबाब नभइदिएको भए यो काम पनि प्रधानमन्त्री अलिक पछि नै गरौँ भन्ने मनस्थितिमा रहनुभएको स्रोतले जनाएको छ ।
हप्ता–दशदिनपछि दशैंको मेलो शुरु हुन्छ । कात्तिकभरि दशैं, तिहारले समय खाने नै भयो । यदि मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर मध्यअसोजभित्र भएन भने मंसिर भेट्ने अवस्था रहन्छ । तर, को–को मन्त्री हटाउने र राख्ने भन्नेबारेमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको बालुवाटारस्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बहिर्गमनको पक्षमा हुनुुहुन्न । जबकि, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले यी दुईलाई फेर्ने भए आफ्नो विमति नरहने भनिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै यी दुई मन्त्रीलाई सुरक्षित राख्न चाहनुभएको बुझिन्छ । तर, ईश्वरको हकमा सेनाले पटक–पटक मन दुखाएका कारण उहाँको मन्त्रालय फेरिने सम्भावना छ ।
दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिअनुसार हटाउने मन्त्रीहरुको सूची बन्दै छ । ती मन्त्रीहरुलाई उनीहरुको च्यानलमार्फत हटाइने कुरामा तयार रहनु भन्ने खबर गर्न बाँकी छ । हटाइने भनिएका मन्त्री हुन्, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, पदमा अर्याल, जगत विश्वकर्मा, बीना मगर र रामवीर मानन्धरसहित तीन राज्यमन्त्री ।
ईश्वरको फेरिने मन्त्रालय टुंगो लागेको छैन । बालुवाटारबाट उहाँलाई अर्थ, परराष्ट्र र गृहतिर आँखा नलगाउन भनिसकिएको छ । अहिले अर्थ र सञ्चार मन्त्री रिक्त छन् । सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुपर्ने कारण ईश्वरलाई सञ्चार पठाइने सम्भावना पनि छ । । पर्यटनमा पार्वत गुरुङलाई पठाउने सल्लाह छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल वा परराष्ट्र सम्हालिरहनुभएका प्रदीप ज्ञवालीको नाम आएको छ । यदि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो भने पनि मन्त्रालय दिने टुङ्गो छैन ।
राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष नेकपामा प्रवेश
भाद्र २८ गते ईन्दिरा एकादशी, बिधिपुर्वक व्रत बस्नाले अग्रजहरुको उद्धार हुने
काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसी ट्रमा सेन्टरबाट निस्किएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पुगेका छन् । आफ्नो अवस्था सामान्य रहेको भन्दै घर जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकले उनलाई डिस्चार्ज गरेका थिए । डाक्टर केसी ट्रमाबाट बाहिरिए लगत्तै आफ्ना सहयोगीहरुका साथमा ट्याक्सी चढेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेका हुन् । डा केसीका सहयोगी हिमालयन कार्कीका अनुसार […]
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो राजाको निरंकुश पञ्यायती शासन हो कि ओलीको कमाउनिष्ट शासन हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत डा. भट्टराईले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई टिचिङ अस्पताल नलगी जबरजस्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगिएको भिडिओ […]
काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले डा. गोविन्द केसीमाथि प्रहरीले गरेको अपमानजनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अकल्पनीय र अक्षम्य भनेका छन् । डा. केसीको इच्छा विपरीत प्रहरीले लछारपछार गर्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा लगेपछि थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिक्रया जनाएका हुन् । ‘सत्याग्रहीमाथिको दुर्व्यवहारः क्रुरताको पराकाष्ठा १ सत्याग्रहीलाई इच्छा विपरीत छुन पनि पाईंदैन । अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि […]
काठमाडौँ। -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परोपकारी संस्थाले समाजमा निःस्वार्थ रुपमा सेवा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । एकचालीसौँ सामाजिक सेवा दिवस मूल समारोह समितले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले मानवीय भावनाले मनैदेखि सहयोग गर्ने सोचका साथ सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सच्चा समाजसेवी आफूले केही पनि लिँदैनन्, अरुको सेवा गर्छन्, समाजसेवाका नाममा हामीले के कति त्याग […]
इलाममा जबर्जस्ती करणी गरी फरार रहेका दुई अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले चुलाचुली–३ का ३० वर्षीय मिलन भनिने अनिश राई र ३१ वर्षीय जितकुमार भनिने निश्चल राईलाई पक्राउ गरेको हो । फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने अभियानअन्तर्गत अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई फरार रहेका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो […]
काठमाडौं । स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री हुने ठूलै आकाँक्षा छ, त्यो पनि अर्थ मन्त्री नै । दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पाण्डे मन्त्री नहुनुमा अर्थमन्त्री बाहेकमा जान नचाहनु नै मुख्य कारण भएको बताइन्छ । अहिले सुरेन्द्रका लागि उपयुक्त समय छ अर्थमन्त्री हुनका लागि । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा नेकपामा अर्थमन्त्री हुन सक्ने […]